Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i George Patton | James Mattis - Fikarohana momba ny vatana teraka
Rehefa nanendry ny Jeneraly Marine i Donald Trump James Mattis ho an'ny Sekreteran'ny Fiarovana, dia nilaza izy fa Mattis no "zavatra akaiky indrindra amin'ny General George Patton. "Mitovitovy amin'ny fitoviana ara-batana, nanontany tena aho raha mety ho ny Firaisam-pinoana vaovao indray i Patton. Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanamafy i Ahtun Re fa i Patton i Mattis tamin'ny fiainana taloha. Kitiho ny sary mba hampitombo azy ireo.
George Patton dia mpino mafy orina ao amin'ny vatana vaovao indray ary nilaza fa hanana fahatsiarovana ny fiainany taloha momba ny ady an-trano fahiny. Nanoratra izao tononkalo manaraka izao momba ny vatana vaovao izy:
Amin'ny alalan'ny fitaratra iray manga
nataon'i Gen. George S. Patton, Jr.
Mandritra ny fotoana iainana,
Teo anelanelan 'ny vala sy ny ady an-trano,
Niady ve aho ary niady ary maty?
Imbetsaka tokoa io kintana io.
Amin'ny endrik'olona maro
Nahita ny fahitana mahafinaritra aho
Ny mpandresy fandresena, ambony.
Niady ho an'ny mammoth vaovao aho,
Efa niady tamin'ny ahi-maitso aho,
Nitanisa ireo bitsibitsika aho
Rehefa nitombo ny fihazakazaky ny hazakazaka.
Fantatro ny antso ho amin'ny ady
Amin'ny endrika miovaova tsy miova
Avy amin'ny feon'ny fieritreretana avo
Ho an'ny fanirian-dratsy amin'ny bibidia.
Nanota aho ary nijaly,
Nanao ilay mahery fo sy ny kofehy;
Niady ho an'ny kibo, henatra, na firenena,
Ary ny tsirairay dia nahita fasana iray.
Tsy afaka milaza ny adiko aho
Satria tsy mazava ny fahitana,
Na izany aza, hitako ireo tarehy miolakolaka
Ary tsapako ilay lefona mitoraka.
Angamba natsatoko antsy ny Mpamonjintsika
Ao amin'ny lafiny masina tsy manam-petra.
Na izany aza, niantso ny anarany ho tsodrano aho
Rehefa maty aho no maty.
Amin'ny aloky ny aloka
Na aiza na aiza misy antsika,
Afaka mahatsapa ny ain'ny aiko aho;
Nampiasa ny nify teo anatrehan'ny sabatra izahay.
Mandritra ny fahitana mazava kokoa avy eo
Tsapako ny hatsembohana vita amin'ny varahina,
Mahatsapa ho mando sy malama ny pikes
Fony i Phalanx, dia nihaona tamin'i Cyrus.
Henoy ny amboaram-pefy amin'ny harness
Raha nipoitra ireo darts persiana ireo,
Jereo ny kodiaran'ny kalesin'izy ireo raiki-tahotra
Avy amin'ny lefom-pohy Hoplite.
Jereo ny tanjona hitombo isam-bolana,
Nahita ny mandan'i Tyro.
Henoy ny fianjeran'ny granite marobe,
Mofomamy ny afo mahatsiravina atsinanana.
Mbola mazava kokoa amin'ny maha Romanina azy,
Afaka jereko akaiky ny Legion,
Raha nandroso hatrany ny laharana fahatelo
Ary ny sabatra fohy dia nahita ny fahavalontsika.
Tsapako indray ny alahelo
Avy amin'ireto lelavola tsy mitongilana ireto
Rehefa nandroaka ny maty i Parthian,
Ary very maina ny fitsipi-pifehezanay.
Tadidiko ny fijaliana rehetra
Ireo zana-tsipìka ireo.
Na izany aza, nanindrona an-dehilahy masiaka aho
Raha maty teo an-damosiko aho.
Maimbo indray aho ny setroky ny hafanana
Rehefa nandalo ny takelaka Flam
Ary ny lefona nandrovitra ny ato anatiny
Toy ny teny amin'ny sahan'i Crecy no nandriako.
Amin'ny fahanginana tsy misy rivotra, manajamba
Avy any amin'ny ranomasina tropika manjelatra
Hitako ny fiakaran'ny volo
Aiza no amelezantsika ireo babo?
Eo afovoan'ny tafio-drivotra
Nandre ny manda aho
Rehefa mitabataba dia asio boribory boribory
Nandresy ny fahavalo.
Niady tamin'ny basy sy cutlass aho
Ao amin'ny kitapo mena sy malama
Miaraka amin'ny afobe mirehitra ato amiko
Ary tady manodidina ny tendako.
Ary mbola taty aoriana amin'ny maha jeneraly
Nopotako niaraka tamin'i Murat aho
Rehefa nihomehy ny fahafatesana sy isa izahay
Matoky ny Kintan'ny Emperora.
Mandra-pahatapitry ny kintana,
Ary nihiaka mafy izahay
Izay làlana lahin'i Ohein
Mihidy anay ao anaty haizim-pito.
Ka ankehitriny miaraka amin'i Tanks a'clatter
Nifangaro tamin'ny fahavalo aho
Fahafatesana maty tamin'ny dingana roa-polo,
Amin'ny alàlan'ny famirapiratry ny kintana.
Ka toy ny amin'ny vera, ary maizina
Ny ady maharitra ela no hitako
Izay niadiako tamina guises maro,
Anarana maro, fa izaho foana.
Ary tsy mahita amin'ny fahajambaoko aho
Ny zavatra nataoko no nataoko,
Fa rehefa manapaka eo amin'ny adin-tsika Andriamanitra
Tamin'ny alalan'ny sitrapoko no niadiako.
Ka mandrakizay amin'ny ho avy,
Hataoko ahoana e no fitokiako,
Ny maty dia teraka mpiady,
Fa ny ho faty indray, indray mandeha indray.
Amin'ny alàlan'ny asako miaraka amin'i Kevin Ryerson, fiainana taloha iray an'ny Patton | Mat Hannibal Barca (183-181 BC), ny Jeneraly Carthage dia nieritreritra ny iray amin'ireo mpitarika miaramila ambony indrindra teo amin'ny tantara.
Fitoviana ara-batana: Ny endriky ny tarehin'i George Patton sy James Mattis dia mitovy.
Ny fiainana taloha talenta: Ny fahasamihafana ara-miaramilan'i Patton dia taratry ny asan'i James Mattis.